Rotterdam Ma Sugeyso Mamnuucida oksaydhka Nitroska • Dawooyinka Inc.eu
Hadal ma aha, laakiin camal. Magaalada Rotterdam waxay ka sugayaan aqlabiyada Nederland mamnuuc nitrous oxide ma dhammaan. Waxaan sameyneynaa siyaasad annaga laf ahaanteena, waxay u muuqdaan inay ka fikiraan magaalada dekada ah. Dadka dhalinyarada ah ee fadhiya boodhadhka waxay halis ugu jiraan ganaax. Intaa waxaa dheer, iibinta meelo badan oo magaalada ah hadda waa mamnuuc.
1 Balloon, buufin
2 Waxba ereyo ma aha, laakiin waa hawlo
3 Mamnuucista isticmaalaha
Xagaagii hore gaaska qosolka ayaa horeyba loo mamnuucay munaasabado badan iyo boulevard-ka Nesselande, kaas oo mar kale sanadkaan soo galay warka xun sababtoo ah rabshadaha aadka u daran ee ay la leeyihiin dhalinyarada. Buuq ka imanaya dhalinyarada isticmaala gaaska qosolka ayaa kaliya ku sii kordhaya magaalada Rotterdam. Kani kaliya ma keenayo xaaladaha khatarta ah ee taraafikada, laakiin sidoo kale wuxuu dhib ku yahay dadka deegaanka. Sidaa darteed Duqa Magaalada Aboutaleb wuxuu magacaabayaa dhul aad u ballaaran oo laga mamnuucay iibinta walxaha kacsan. Iibiyayaashu waxay halis ugu jiraan ganaax dhan 100 euro.
Markay nuugaan buufinno, dhallinyarradu waxay qaataan tallaal gaas lagu qoslo si dhakhso ah, u sakhraansanaan jaban. Dhowr ilbidhiqsiyo ayaad kaadhka ka maqan tahay, sababtuna tahay jidhka oo dareen-celinaya yaraanta oksijiinta. Tani waxay abuurtaa xaalad khatar ah waana dhibaato caafimaad dadweynaha. Sidaa darteed Xoghayaha Gobolka Blokhuis wuxuu ku baaqayaa in la mamnuuco walaxda uu quseeyo Sharciga Opium. Haddii soo jeedintiisa ay aqlabiyad heli doonto, si kastaba ha noqotee, waa la arki doonaa.
Waxba ereyo ma aha, laakiin waa hawlo
Rotterdam ma sugayaan mamnuucidan. Si kastaba ha noqotee, qosol ayaa horayba uga jiray magaalada dekedda ah. Mamnuucida iibka ee meelo badan sida Noordereiland, godadka Katendrecht, Kop van Zuid iyo hareeraha Maasboulevard, dhibaatada ka taagan xudunta ayaa wax laga qabtay. Intaa waxaa dheer, tareenada dhulka ka hooseeya iyo saldhigyada dhulka hoostiisa mara iyo meelaha la dhigto ee ku dhow ayaa loo qoondeeyay 'aagag cas'. Iibinta kartoonada iyo buufinnada sidoo kale waa ka mamnuuc fagaarayaasha, iskuulada, xarumaha wax lagu gado iyo jardiinooyinka. Su'aashu waxay tahay, dabcan, in iibka madow uusan si sii kordheysa uga dhici doonin khadka tooska ah.
Kaliya maahan kuwa wax iibiya in si adag wax looga qabto, golaha magaalada iyo duqa magaalada Rotterdam ayaa sidoo kale ku doodaya mamnuucista isticmaaleyaasha haddii ay dhacdo buuq. Tani waxay ku jiri doontaa APV 1da Janaayo. Waxaad ku arki kartaa oo keliya boodhadhkii dhinacyada ay ka rajeynayaan Rotterdam.
Akhri wax dheeraad ah AD.nl (Xigasho)
Codsiga, United for Access, waxaa loo bilaabay culeyska dhaqaale ee cudurka faafa ee COVID-19 ...
Dhakhaatiirta cilminafsiga ayaa xitaa wanaajin kara niyadda ka dib dhammaadka sare
Daawooyinka maskaxda lagu daweeyo sida LSD iyo psilocybin - oo sidoo kale loo yaqaan "likaha sixirka" - waxay sare u qaadi karaan niyadda ...
Toddobaadkan, Arbacada Koowaad waxay soo saareen nidaamkooda xashiishka ee UK, iyagoo keenaya warshadaha nukliyeerka iyo shirkadaha ka dambeeya Boqortooyada Ingiriiska ...